कांग्रेसको पराजयमा कहाँ चुके देउवा ? अब लगत्तै कठोर कदमको तयारी गर्दै ! | suryakhabar.com
Home राजनीति कांग्रेसको पराजयमा कहाँ चुके देउवा ? अब लगत्तै कठोर कदमको तयारी गर्दै !
कांग्रेसको पराजयमा कहाँ चुके देउवा ? अब लगत्तै कठोर कदमको तयारी गर्दै !
on: २ पुष २०७४, आईतवार ०९:३४ In: राजनीतिTags: कांग्रेसको पराजयमा कहाँ चुके देउवा ? अब लगत्तै कठोर कदमको तयारी गर्दै !No Comments
काठमाण्डौ । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा धक्का बेहोरेसँगै नेपाली कांग्रेसमा एउटा बहसले जबर्जस्त रुपमा स्थान पाएको छ । कांग्रेसले निर्वाचनमा किन हार बेहोर्नुपर्यो ? करिब एक शताब्दी लामो राजनीतिक इतिहास बोेकेको उक्त पार्टीभित्रको सांगठानिक गतिविधिले यो पराजयमा कत्तिको प्रभाव पार्यो ? पार्टी नेतृत्वको यसमा कत्तिको कमजोरी छ ? यी आदि विषयमा अहिले कांग्रेसभित्र व्यापक रुपमा छलफल चलिरहेको छ ।
वास्तवमा अहिले कांग्रेस पार्टी सभापति परिवर्तनको आवश्यकता छ कि छैन ? छ भने त्यसको दाबेदार को हुन सक्ला ? भन्न विषयमा पनि बहस तिव्र हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नुमा पार्टी नेतृत्वले कति जिम्मेवारी लिनुपर्छ ? यो विषय त महत्वपूर्ण छँदैछ तर कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएयता सम्पन्न गर्न नसकेको केही सांगठनिक कामहरुहरुले पनि चुनावी संघर्षमा हार बेहोर्नुपरेको केही कांग्रेस नेताहरुले दाबी गर्न थालेका छन् ।
सो पार्टीमा अहिलेसम्म केही केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु मनोनित गर्ने काम हुन नसक्नु, महत्वपूर्ण विभागहरुले पूर्णत नपाउनु, बेला–बेलामा पार्टीले अन्य पार्टीहरुसँग गर्नुपर्ने कडा प्रतिस्पर्धाका बारेमा समीक्षा हुन नसक्नु लगायतका विषयमा समेत गम्भीर छलफल हुन नसक्दा कांग्रेसले सर्वनाक हार बेहोर्नुपरेको सो पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरु बताउँ थालेका छन् । कांग्रेस हाक्ने काम पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र पनि होइन तर उनले निर्वाह गर्नुपर्ने यी जिम्मेवारीमा उनी चुकेका छन् ।
अहिले निर्वाचनको समानूपातिकतर्फको मतपरिणामलाई हेर्दा कांग्रेस कमजोर पार्टी होइन भन्ने प्रमाणित समेत भएको छ । एमालेको हाराहारीमा कांग्रेस पार्टीलाई मत झरेको छ । २० औं लाख मत आउने दलहरुमा करिब ५० हजारको तलमाथिको मतान्तर हुनुलाई कमजारी ठानिदैन । त्यसैले कांग्रेसको रुख ढल्यो भन्नेहरुलाई पार्टी मतले गतिलो जवाफ दिएको छ ।
यो परिणामपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्वनै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेहरुले पनि बोल्ने आँट गर्न सक्दैनन् तर प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणामलाई हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वले जवाफ भने दिनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसलाई किन धेरै मत झरेन यो सवालमा उसले केही कारणलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
पहिलो,नेपाली कांग्रेसका लागि एमाले–माओवादी दुवै पार्टीको दोब्बर मतले उसलाई चूनौती दियो । दोश्रो, कांग्रेसले आफ्ना युवा भातृसंगठनहरुलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न चुकेको देखिन्छ । कांग्रेसका युवा संगठनमा नेविसंघ, नेपाल तरुण दल लगायतका दस्ताहरु रहेका छन् । ती संगठनका नेतृत्वले चुनावी मोर्चामा साथ नदिएको पुष्टि हुन्छ ।
तेश्रो,निकै लामो समदेखि पार्टीभित्र देखिदै आन्तरिक कलह पनि अर्को कारण हो । त्यस्तै पार्टीभित्र उम्मेद्वार चयनमा व्यक्तिगत हालमुहालीले पनि त्यसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । यी सबै आन्तरिक र बाह्य कारण र चूनौतीहरुसँग सभापति देउवा र उनको नेतृत्व जुध्न चुकेको देखिन्छ ।
युवा संगठनहरु विघटन गर्ने तयारीमा देउवा !
चुनावी परिणाम आएलगत्तै बस्ने महासमिति बैठकमा कांग्रेसले गम्भीर समिक्षा गर्दैछ । चुनावमा पार्टीले सर्वनाक हार बेहोर्नुका कारणहरुलाई केलाउँदै पार्टी नेतृत्वले अब आधारभूत तहदेखिनै कांग्रेस पुनःनिर्माणको तयारी थाल्ने नेताहरु बताउन थालेका छन् । त्यसका लागि नेतृत्वले कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।
यसै क्रममा कांग्रेस नेतृत्वले नेपाल तरुण दल लगायतका युवा संगठनहरुलाई विघटन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारी समेत भैरहेको कांग्रेस निकट श्रोतले बताएको छ । त्यतिमात्र होइन सो पार्टीेले नेपाल विद्यार्थी संघलाई समेत विघटन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चुनावमा सोचेजस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका यी संगठनको नेतृत्वमाथि नै पार्टीभित्र आवाज उठ्न सुरु भएको छ ।
अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरुको यो आवाजलाई सम्बोधन गर्न र भोलिका दिनमा शक्तिशाली युवा संगठन निर्माण गर्न पनि कांग्रेस नेतृत्वले नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संगठनलाई विघटन गर्ने तयारी गरिरहेको श्रोतले बताएको छ ।
कांग्रेसले पार्टी शुद्धिकरण र पुनः निर्माणको सुरुवात पनि यिनै संगठनबाट सुरु गरेको सन्देश बाहिर दिन चाहिरहेको छ । जसले भोलीका बाहिरी मोर्चाहरुमा पार्टी शसक्त हुन सकोस् । यस्तो तयारीमा रहेको कांग्रेसको यात्रा अब कसरी अघि बढ्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
Tags: कांग्रेसको पराजयमा कहाँ चुके देउवा ? अब लगत्तै कठोर कदमको तयारी गर्दै !
निःशुल्क आँखा शिविरबाट सयौ लाभान्वित
२ पुष २०७४, आईतवार ०९:३४